Home » သတင်း » Facilis အတ္တလန္တိတ် & Reef နှင့်အတူပြည်ပအောင်မြင်
Facilis အတ္တလန္တိတ် & Reef နှင့်အတူပြည်ပအောင်မြင်
Hudson, MA (စက်တင်ဘာလ 12, 2017) - "အဘို့အထပ်အမိန့်တစ်ခုအရေအတွက်ကိုအနိုင်ရရှိမှု Facilis TerraBlock ဒီကြော့၏တည်မြဲလူကြိုက်များမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်သေးအလွန်အမင်းထိရောက်သောက Shared သိုလှောင်မှုစနစ်အကုန်ကျ "ဒန် Muchmore, Tyrell CCT ၏အရောင်းဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ Muchmore နှစ်ခုသိသိသာသာသစ်ကိုအမိန့်သတင်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသည် Facilis ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အခြေစိုက်စက်ရုံများ, အတ္တလန္တိတ် Productions နဲ့ Reef ရုပ်မြင်သံကြားကနေပူးပေါင်းမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကွန်ရက်များအဘို့သိုလှောငျဖြေရှင်းနည်းများ။
နှစ်ဦးစလုံးကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏လက်ရှိတိုးချဲ့ဘို့အမိန့်ထားရှိပါပြီ Facilis shared သိုလှောင်မှုစနစ်များကို။ အဆိုပါစနစ်များကို Tyrell CCT အသုံးပြုပုံသတ်မှတ်ထားသောကယ်နှုတ်ခြင်းနှင့်တာဝန်ပြီ, Facilisဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် '' ဒေသခံရုပ်သံလိုင်းဖက်။
Reef ရုပ်မြင်သံကြား, သူတို့ရဲ့အသစ်အမှာ Facilis သိုလှောင်မှုစနစ်ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းမှတဆင့်အမွေဆက်ခံသော DDP သိုလှောင်မှုစနစ်ကအစားထိုးနေသည်။ တိုးချဲ့အဆိုပါ Facilis shared သိုလှောင်မှုစနစ်ဟာသူတို့ရဲ့ network ပေါ်မှာ run နေ, အပိုဆောင်းဖောက်သည်တစ်ဦးအရေအတွက်ကိုကူညီပံ့ပိုးရန် Reef ကို enable လိမ့်မယ်နဲ့သူတို့ရဲ့မီဒီယာသိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုထားရှိရန်။
"ကျနော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လျောက်ပတ်သည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဖို့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ကြီးထွားဖို့လိုအပ်တဲ့" မိုက်ကယ်ဆန်းဒါးလန်း, အတ္တလန္တိတ် Productions မှာဆောင်မှုများ၏ဦးခေါင်း commented ။ "ကျနော်တို့ကလူအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောရောင်းချသူဖြေရှင်းချက်အပေါ်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယဖျော်ဖြေခြင်းနှင့် Facilis ယင်းထွက်မတ်တပ်ရပ် option ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှိပြီးသားအသုံးပြုသူအဖြစ်ကျနော်တို့ကို system ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်စွမ်းရည်များနှင့်အခါအကောင်းတစ်ဦးမြို့တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကိုယ်စားပြုအခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းချက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်၏ယုံကြည်မှုပါပဲ။ "
အတ္တလန္တိတ် Productions မှာ TerraBlock ချဲ့ယူနစ်အိမ်တော်၌နောက်ထပ်စီမံကိန်းများကိုဆောင်ကြဉ်းနှင့်နေဆဲသိုလှောင်မှုဆာဗာတွင် '' တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပြင်ဆင်ရန် '၌လက်ရှိစီမံကိန်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကုမ္ပဏီနိုင်ပါတယ်။ တိုးချဲ့မှုယူနစ်များ၏အကျိုးအတွက်ယာဉ်မောင်းလိုအပ်ချက်အပိုသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ပင်ဖြစ်သည်လျှင်အသုံးပြုသူများသည်အခြား server ကိုမလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။
"Facilis နှင့် Tyrell ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုနားလည်, "Dominik ယာကုပ်, Reef ရုပ်မြင်သံကြားမှာ Post ကိုထုတ်လုပ်မှု၏ဦးခေါင်းကဖော်ပြသည်။ "သူတို့က ပို. ပို. မြင့်မားသောဒေတာနှုန်းမှာ Workflows တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများကိုထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနားလည်ပါတယ်။ ထိုသူတို့ကအကြှနျုပျတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘတ်ဂျက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှပေါင်ကိုအပြစ်လွတ်နိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှိရာလုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်ဖြစ်ရပ်မှန်များယနေ့နားလည်ပါတယ်။ "
Facilis TerraBlock: ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထူးချွန်
IBC 2017 ၏ဗားရှင်း 7.0 မှာဥရောပတိုက်တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသလျက်ရှိ Facilis'' TerraBlock တစ်ဦးကိုကိုယ်စားပြုတယ် ကွမ်တမ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဆောက်အဦထဲမှာ installed နှင့်သောင်းချီအမတ်နေရာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ 3,000 ကျော်ယူနစ်နှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များ shared သိုလှောင်မှုစနစ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်တိုးတက်မှု။ 2003 စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက Facilis ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကွန်ရက်များအဘို့အမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဗားရှင်း 7.0 ၏ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၎င်း၏မစ်ရှင်မှစစ်မှန်တဲ့တည်းခိုတော်မူကြောင်းကိုတစ်ဦးချုပ်သာဓကဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်က Web ကို Console နှင့်အတူ, Facilis , အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းတိုးမြှင့်အိုင်တီပေါင်းစည်းမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်နှင့်အပြုသဘော system ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏မျှော်လင့်ချက်များပြောင်းပေးပါ။ အဆိုပါ Web ကို Console ဖောက်သည်ဖြစ်နိုင်သောခဲ့ကြသည်ထင်မ features တွေပို့များနှင့်ရှုပ်ထွေးတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲကလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
end-အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးခေတ်မီ browser ကို-based နှင့်ပိုပြီးနှစ်သက်နှင့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခြင်းအပြင်, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုမိုအဆင့်ဆင့်ခွင့်ပြုထားတဲ့မိုဘိုင်း-သဟဇာတ interface ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပိုများသော granular ခွင့်ပြုချက်စီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးပြုသူများကပေးထားသောစီမံကိနျးအတှကျအရင်းအမြစ်များကိုအရေအတွက်တိုးပွားလာဖို့ access ကိုခွင့်ပြု, တူညီတဲ့ client ကိုကို Workstation အပေါ်မျိုးစုံ password ကို-protected အကောင့်နှင့်အတူ login မှခွင့်ပြုပါတယ်။ တဦးတည်းဒေတာလမ်းကြောင်းခိုးယူလျှင်, client ကိုစနစ်များဆက်သွယ်မှုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အလုပ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, တစ်ဦးဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယလမ်းကြောင်းမှ failover ပါလိမ့်မယ်။
Web ကို Console, ဒီအမျိုးအစားဟာ system အတွက်တစ်ဦးပထမဦးဆုံး Ethernet သို့မဟုတ် Fiber Channel ကိုပေါ်မဆိုအသုံးပြုသူများအတွက်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတောင်ပေါ်မှာမှစက်ချိတ်ဆက်ပေးသည် Facilis ကွန်ယက်ကို devices များသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာ drives တွေကိုဖြစ်စေအဖြစ် volumes ကို။ အသံအတိုးအကျယ်အသှငျအပွငျပု OS နဲ့ application ကိုအပြုအမူပြောင်းလဲကတည်းကဒီ feature ဟာသူတို့ရဲ့ applications များ၏တုန့်ပြန်တိုးမြှင့်ဖို့လိုအသုံးပြုသူများအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ ဒီ feature နောက်ထပ်ခွဲခြား Facilis စံကွန်ယက်ကိုဖိုင်စနစ်များထဲကနေမျှဝေ File System နှင့် Facilis စံကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်မှုပံ့ပိုးပေးမှ။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများပြောင်းလဲနေသောအသုံးပြုသူများနှင့်သိုလှောင်မှု volumes ကို၏ bandwidth ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စုစည်းစနစ်ကဒက်ရှ်ဘုတ်တွင် server ကို performance ကိုအစီရင်ခံပျော်မွေ့။ Volume ကိုဖန်ဆင်းခြင်း, အရွယ်အစားပြောင်းလဲမှုနှင့် deletion 'အဖြစ်အားလုံးခွင့်ပြုချက်လုပ်ရပ်များမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအပါအဝင်မည်သည့် browser ကို-enabled device မှပြီးစီးခဲ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲသူ (တွန်းအားပေး) ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စုစုပေါင်းစက်ရုံထိန်းချုပ်ဘို့, မဆိုချိတ်ဆက် client ကို၏ desktop ပေါ်မှာကနေ (ဆွဲ) volumes ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပါဝါရှိပါတယ်။ Enhanced LDAP နှင့် Active Directory ကိုပေါင်းစပ်ညှိအသုံးပြုသူ databases ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုရှောင်ရှား, တစ်ဦးကို real-time အသုံးပြုသူ lookup ပြုလုပ်နေပါဝင်သည်။
အသစ်က Hub ဆာဗာနှင့်အတူ, Facilis ကန့်သတ် CapEx ဘတ်ဂျက်အပေါ်သူတို့ရဲ့ content တွေကိုဖြန့်ဝေကြီးထွားဖို့ရှာကြံလျက်ရှိသောသူတို့ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အဆောက်အဦကိုအာရုံစိုက်နေသည်။ နောက်ကျော-အဆုံးသိုလှောင်မှုယူနစ်သို့တည်ဆဲစနစ်များ repurposing အားဖြင့်, အ Hub server ကိုထိုအဟောင်းများကိုယူနစ်၏ Processor ကို-intensive ပမာဏ offloads ။ ရရှိလာတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ယခင်ပတ်ဝန်းကျင်၏နှစ်ဆအထိဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်မှု၏ပေါင်းစည်းရေး, စီမံကိန်းများနှင့်အသုံးပြုသူဝန်-balancing နှင့် Multi-server ကိုအရင်းအမြစ်များစုစည်းမှုမှတဆင့်, အ Hub ဆာဗာတွင်ကောင်းသောစေသည် Facilis'ဟာသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏သက်တမ်းမှတဆင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီပံ့ပိုးရန်ကတိ။
Facilis Shared File System ဗီဒီယိုနှင့်အော်ဒီယိုအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုများအတွက်အများဆုံးကောင်းစွာ-optimized ဖိုင်စနစ်ကဖြစ်ပြီး, ယခုပါဝါ3မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်rd-party သိုလှောင်မှုသည် array ။ အတော်များများကအဆောက်အပူးတွဲ-တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ကွန်ရက် Server-ပူးတွဲအဖြစ်အသုံးပြုခံနေရအမျိုးမျိုးသောသိုလှောင်မှုစနစ်များရှိသည်။ ဤသည်သိုလှောင်မှုရရှိမှုနှင့်အတူသစ်တစ်ခုဘဝအသက်ရှင်နိုင် Facilis ပွင့်လင်းသိုလှောင်နှောင်ကြိုး (OSA) ။ စွမ်းရည်အားဖြင့်လိုင်စင်ရ, အရှိဆုံး SAS နှင့် Fiber Channel ကိုသိုလှောင်မှု TerraBlock နှင့် Hub ဆာဗာများနှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်အရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်ပူးတွဲ။ ဒါကသူတို့တစ်တွေအလှည့်-key ကိုစနစ်မတတ်နိုင်ခဲ့ကြပေမည်ထက်ပိုကြီးတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုအကောင်းဆုံးခွဲဝေမှုများနှင့်ဆက်သွယ်မှုပေးပါသည်။
ပြင်ပ Array ကိုပု shared ဖိုင်စနစ်ကတဆင့်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူလုံခြုံနှင့် Fiber Channel ကိုနဲ့ Ethernet ချိတ်ဆက် clients များကျော် Multi-user writable ဖြစ်ကြ၏။ Facilis နှုန်း-ထိုင်ခုံလိုင်စင်သို့မဟုတ်ထိုင်ခုံ-count ကန့်အသတ်မရှိဘဲ Ethernet, Fiber ရုပ်သံလိုင်းကျော်တစ်ဦး shared file system ကိုပေးတစ်ခုတည်းသောထုတ်ကုန်နေဆဲဖြစ်သည်။
ပေါင်းစည်းမှု post ကိုထုတ်လုပ်မှု တီဗီနည်းပညာ	2017-09-12
ယခင်: အမိုင်နို Minerva 10 အဆင့်မြင့်လစာ-TV ကိုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ-Aria devices များ certifies
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Facilis အတ္တလန္တိတ် & Reef နှင့်အတူပြည်ပအောင်မြင်" ။ http://www.broadcastbeat.com/facilis-succeeds-overseas-with-atlantic-reef/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။